Ka hor kulanka caawa ee Juventus iyo Inter Milan… miyuu Cristiano Ronaldo horey u wajahay Nerazzurri? – Gool FM
(Serie A) 07 Dis 2018.Juventus ayaa dooneysa inay halkeeda kasii wadato guulaheeda kulamada horyaalka Serie A ee xili ciyaareedkan, kadib markii ay caawa kooxda Inter Milan ku soo dhaweyso Allianz Stadium, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 15-aad ee horyaalka Serie A.
Juventus ayaa heysata gacanta sare kahor kulanka caawa, marka loo fiiriyo kulamadii ay soo wada ciyaareen labada kooxood sanadihii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay.
Bianconeri ayaa 10-kii kulan lasoo dhaafay kala kulantay dhigeeda Inter Milan 3 guuldaro oo kaliya, waxay guul ka gaartay 5 kulan, halka 3-da kalena ay wada galeen barbaro.
Ma ahan arintan waxa kaliya ee ka dhigaysa in kooxda Juventus ay guuleysan karto kulanka caawa, balse sidoo kale waa inay heysato Bianconeri adeega Cristiano Ronaldo, kaasoo lagu tiriyo inuu ka midyahay xidigaha ugu fiican kubada cagta mudada 10-kii sano ee lasoo dhaafay.
Juventus ayaa tan iyo markii ay lasoo saxiixatay Cristiano Ronaldo waxay xili ciyaareedkan guul gaartay 13 kulan ee ah horyaalka Talyaaniga, waxayna barbaro galeen 1 kulan oo kaliya, mana aysan la kulmin wax guuldaro ah kulamada Serie A.
Cristiano Ronaldo ayaan ahayn markii ugu horeesay uu kahor yimid kooxda Inter Milan wuxuuna markii ugu horeesay uu wajahay sanadii 2002 xiligaas uu ku sugnaa Sporting Lisbon waxayna da’adiisu ahayd 19 jir, wuxuuna kulankan ciyaray kaliya 32 daqiiqo, mana uusan dhalinin wax gool ah, xili kulanka uu ku soo idlaaday barbaro.
Todoba sano ka dib Cristiano Ronaldo ayaa ku wajahay Inter Milan kooxdiisii hore ee Manchester United waxayna ahayd sanadii 2009 oo ahaa sanadkii ugu dambeeyay Cristiano Ronaldo ee garoonka Old Trafford, kulanka ayaa ahaa tartanka Champions League, lugta hore waxay kusoo idlaatay barbaro inkastoo uu Cristiano ciyaaray 90-ka daqiiqo.
Lugtii labaad, Ronaldo ayaa ugu danbeyntii awooday inuu sameeyo farqi, wuxuuna kooxdiisa Red Devils ku hogaamiyay in Inter ay guul kaga gaarto 2-0, wuxuuna dhaliyay goolka 2-aad daqiiqadii 49-aad, iyadoo laga war qabo in macalinka Nerazzurri xiligaas uu ahaa Jose Mourinho.
JUVENTUS vs INTER MILAN: Maxaad uga Baahan tahay inaad ka ogaato kulanka Caawa ee 'Derby d'Italia'